ILoftStudio enomtsalane enendawo yomlilo
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguBrigitte
Le studio inomtsalane inepatio yegadi yabucala kunye nomnyango wabucala, indawo yomlilo epholileyo kunye neendawo zokupaka simahla. Indawo yokuhlala evulekileyo kumgangatho wesibini, inebhedi enye ephindwe kabini (180cm), indawo encinci yokuhlala, indawo yokutyela kunye nekhitshi elincinci lokuphekela. Igumbi lakho lokuhlambela lineshawa kunye nebhafu.
Ibekwe eMölndal, kufutshane neGothenburg, amachibi kunye nendalo ilungele ukuhlala impelaveki. Indlela emfutshane eya kwizikhululo zebhasi ezininzi kunye neetram. Ndingathanda ukukuxelela ngakumbi malunga neendawo ezintle ezikufutshane.
Umnikazi wendlu uhlala kwigumbi elisezantsi. Umyezo wohlulwe ube zizithuba ezibini. Unendawo yakho yokupaka. Iibhasi ezininzi kunye neetram ezikufutshane nedolophu yaseGbg.
Unegalari yesixeko eMölndal centrum. Kolu dederhu lweevenkile lutsha, uya kufumana yonke into oyifunayo. Apho unokufumana iikhefi ezininzi kunye neeresityu. Uneyona ndawo yokubhaka inomtsalane ikufutshane (Brogyllen) apho unokufumana khona isonka esimnandi kusasa. I-Safjället kunye ne-Ängårdsbergen ziindawo zendalo ezintle zokuhamba ngeenyawo ehlathini. Inqaba yaseGunnebo yindawo ethandekayo enecafe entle kakhulu, indalo emangalisayo kunye namachibi apho unokuqubha okanye usebenzise i-kayak yakho. I-Kvarnbyn yindawo encinci yelali enomdla ekufutshane. IStenladan (eKvarnbyn) yindawo enomtsalane ukuba uthanda ikofu elungileyo.
Mna, ndiyakuthanda ukudibana nawe ekufikeni kwakho. Ndiyathemba ukuba ndizokwazi ukukwamkela xa uhlala, kwaye ndikuncede ngeminye imibuzo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Solängen